Nhau - Iyo yekutanga hafu yeSanxin yekurapa manejimendi kudzidziswa
Mune rakakosha "denda" gore, isu takatanga kutora "Xinhuo" kuburikidza nepuratifomu yegore uye takasvika nemhuri yeSanxin munaJune 28. Tarenda ndiyo hwaro hwebhizimusi. General Secretary Xi akadzokorora kusimbisa kuti matarenda ndiwo marongero zviwanikwa ekuona nyika yekumutsiridza uye kuhwina danho mumakwikwi epasi rese. Kuna Sanxin, matarenda akakodzera Sanxin ndiwo sosi yekuvaka zana rekare hwaro uye hwaro hwebhizinesi kuti irambe isingakundike.
Bhatani rehupenyu rinofanira kunge rakasungwa kubva pakutanga. Kana bhatani rekutanga risiri iro, zvimwe zvese zvinenge zvisirizvo. Kwechikamu chechitanhatu cheSanxin's "Xinhuo chirongwa", kambani yakagadzira chirongwa chakadzama chekudzidzisa, icho chakabaiwa nehungwaru kubva pazuva rekutanga rebasa. Kubva pakudzidziswa kwekunze kwekusungwa kusvika mukubatana kwechikwata, kubva pabasa rekushandura kuenda pakuronga basa, kubva kutsika yemakambani kuenda kune manejimendi uye nekudzora system, kubva kuSanxin nyaya kusvika kuSanxin ramangwana, kubva kune vatungamiriri vekambani kusvika kune vezvemabhizimusi, varairidzi vedu vese vanoziva zvese, uye yedu "Xinhuo" iri vakazvipira uye vasinganeti.
Sezvo chirevo chekare chichienda, "baba vanozvarwa, mudzidzisi anodzidzisa.". "Mudzidzisi" haangopi ekupa ruzivo uye hunyanzvi, asiwo kuwedzera manzwiro echokwadi ekuva nehanya kwevabereki nekudzidzisa. Muhafu yekutanga, takaita mhemberero huru yekunamata vadzidzisi, iyo isiri chete mhemberero, asi zvakare nhanho yakakosha mune ramangwana basa raGuan Peisheng. Sezvo chirevo chichienda, "kuteerera kumashoko ako kuri nani pane kuverenga kwemakore gumi". Mudzidzisi ndiye achave mutungamiriri kwatiri kuvhura nzvimbo yebasa.
Enterprise kosi yekudzidzira
▲ Vamwe vadzidzisi
"Pepa chete ndipo paunonzwa kunge usina kudzika pakupera kwezuva, uye uchafanira kudzidzira." Sanxin yashingairira kupindura nekunyatsoita kuvakwa kweuto hombe revashandi-vane ruzivo, vane hunyanzvi uye vane hunyanzvi, vakaendesa mberi mweya wevashandi vemuenzaniso uye mhizha, uye vakagadzira fashoni yemagariro evashandi vane mbiri uye nehunyanzvi mamiriro ekurwira kukwana . Zvatakadzidza hazvifanire kugara mumabhuku kana mumisoro yedu, asi zvinofanirwa kuitwa muchiito nekukoshesa zvisikwa. Tinofanirwa kuwana kubatana kweruzivo nekuita, kudzidza zivo yechokwadi uye kunzwisisa zvinoreva zvazviri mukuita, kusimudzira chiito neruzivo uye kutsvaga zivo nekuita.
Kugadziridza kwemhando yepamusoro
“Kunyange nzira iri padyo, hatigoni; kunyange nyaya yacho iri diki, hazvigoneke. ” Yese bhizinesi, hombe kana diki, inoitwa pasi-pasi-pasi uye zvishoma nezvishoma. Isu tinofanirwa kuve vakaomarara uye vane pragmatic, shanda nesimba uye shanda nesimba. Xinhuo inotanga moto wepasango, uyo usingadzoreke. Vanhu veSanxin vanofanirwa kutsiga mune zvavanofunga uye zvavanotenda, vane zvishuwo zvakakwirira, kuve pasi-pasi, uye kuve vafambisi wenguva. Mukuita kwakajeka kwekuona kurota kwaSanxin Kwemakore zana, vanofanirwa kusunungura zviroto zvavo zvehudiki, uye voita nhamburiko dzisingaperi dzekunyora zvitsauko zvine hupenyu zvekusimudzira hutano hwevanhu!